San Andrés de Teixido သည်ပင်လယ်ပြင်သို့ထွက် | ခရီးသွားသတင်း
မိုးတိမ်တွေထဲအရည်ပျော်သွားတဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေ၊ ပင်လယ်၊ Galicia ကမ်းလှမ်းသည် San Andrésက de Teixido။ ၎င်းသည်အနိမ့်အမြင့်၊ အနိမ့်အမြင့်၊
ဒါဒီမှာပါ San Andrésက de Teixido ၏ Sanctuaryအလွန်ထင်ရှားသောဘုရားဖူး ဦး တည်ရာ။
ဒါဟာမြှို့နယ်အတွက်သောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ် Cedeiraပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးကနေအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေအနားမှာရှိတယ်။ ၎င်း၏အမည်ကနေဆင်းသက်လာ စည်သူလွင်, Castilian အတွက်, yew သစ်ပင်များ, နှင့်တည်ရှိသည် A Coroñaရှိ Cedeira မှ ၁၂ ကီလိုမီတာသာကွာဝေးသည်။ ၎င်းကိုလူ ၅၀ သာနေထိုင်ပြီးပင်လယ်အထက်မီတာ ၁၄၀၊ မီတာ ၆၀၀ မြင့်သောကမ်းပါးများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
ဒီ site ကိုလည်း၏အမည်အားဖြင့်လူသိများသည် San Andrésသည် Cabo do Mundo သို့မဟုတ် San Andrés de Lonxe ဖြစ်သည်၎င်း၏ဝေးလံခေါင်သီတည်နေရာနှင့်ပတ်သက်။ နှစ် ဦး စလုံးအဓိပ္ပာယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားသည်၊ မှန်သည်၊ သို့သော်လှပသောကြောင့်ရှုခင်းသည်စစ်မှန်သောပို့စကတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုတန်ဖိုးထားဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ Cedeira နှင့် San Andrésအကြားအကွာအဝေးလမ်းလျှောက်ပါစေ, Capelada တောင်တန်းကိုဖြတ်ကျော်။ မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များပါတကား!
တကယ်တော့ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး အများအပြားဘုရားဖူးလမ်းကြောင်းရှိပါတယ် San Andrés de Teixido ရဲ့ Sanctuary မှာသွားပြီးသူတို့သွားတဲ့လမ်းကိုတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းမသွားဘဲတခြားဒေသတွေကိုဖြတ်ပြီးသွားတာကြောင့်ရက်ပေါင်းများစွာဆိုလိုတယ်။ သို့သော်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုပင်သင်ရွေးချယ်ပါ၊ အမြင်: လက်အား Garita da Herbeira သို့ ၆၂၅ မီတာမြင့်သည် Os Carrís အနည်းငယ်နိမ့်အမြင့်မှာ 425 မီတာ, ဒါပေမယ့်နည်းတူလှပသော။
အခုတော့ဘာကြောင့်ဘုရားဖူးလာရောက်တဲ့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်ရတာလဲ? ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကအဲဒီမှာတစ်နေ့ပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ် စိန့်အင်ဒရူးအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်တောင်တန်းများကြုံတွေ့ရသည့်အချိန်တွင်သူ၏လှေနှင့်အတူကမ်းခြေသို့ပျက်ကျခဲ့သည်။ ဒီမှာလှေတစ်ခုနဲ့တူတဲ့ကျောက်တစ်လုံးရှိတယ်။ ၏ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အတိတ် သင်္ဘောပျက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝကိုဆုချပြီးဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် .ဝံဂေလိတရား ဒေသခံ Celts ရန်။ ဒါပေမယ့်သိပ်ပြီးမလွယ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေဟာအလွန်သေးငယ်သောနှင့်ဝေးလံသောအုပ်စုများတွင်နေထိုင်ကြပြီး Santiago de Compostela နှင့်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းငါသိပြီးဖြစ်သည်။
အခြေအနေကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ် အရပျပြီးသား druids များအတွက်အစွန်းရောက် site ကိုဖြစ်ခဲ့သည် သူက၎င်းသည်အခြားကမ္ဘာ၊ နောင်တမလွန်ဘဝအတွက်တံခါးတစ်မျိုးနှင့်တူသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကောင်းသောခရစ်ယာန်ဘာသာဖြင့်အမြန်ချေဖျက်ရန်လိုအပ်သည်မှာအရေးတကြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ခရစ်တော်က“ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပါစေ၊ သင်ဟာ Santiago ထက်မနည်းစေဘူး။ သင်တို့ဆီသို့မလာဘဲမည်သူမျှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ။ ပြီးတော့သူအသက်ရှင်နေတုန်းအဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သေပြီလို့အယူခံဝင်ရမှာပါ။
ဒါဟာသတင်းစကားကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူပုံရသည် ယနေ့သူသည်ဂါလိလဲပြည်တွင်ဒုတိယအအများဆုံးလာရောက်သည့်သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည် Santiago de Compostela ပြီးနောက်ထောင်နှင့်ချီသောဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူ။ ဗိမာန်တော်သည် ၁၂ ရာစုတွင်တည်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ၁၇၈၅ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်အယူမှားထုံးတမ်းများနှင့်ခရစ်ယာန်ခေတ်မတိုင်မီထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်ရောနှောထားသောနေရာဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့မလည်ပတ်သူများ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်တွားသွားသတ္တဝါများနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားပုံစံများဖြင့်လမ်းပြနေသောလမ်းများပေါ်တွင်သွားလာနေသည်ဟူသောသတင်းကိုကြားရသောအခါထင်ရှားသည်။
ခရစ်တော်ပြောခဲ့သည့်နောက်၎င်းသည်သန့်ရှင်းရာဌာနပတ် ၀ န်းကျင်၏အဓိကဒဏ္legာရီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုအသက်ရှင်ရန်မလည်ပတ်ပါကသင်သည်အင်းဆက်သို့မဟုတ်တွားသွားသတ္တဝါအဖြစ်သို့ပြန်ဝင်ပါလိမ့်မည် ဒေသခံသို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့လိမ့်မည် စိုးလ်ခံစားနေရတာ စက်တင်ဘာလရဲ့အစမှာဖြစ်ပျက်သောဘုရားဖူးစဉ်အတွင်း။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ဘုရားဖူးများသည်ကျောက်တုံးများကိုဖွဲ့စည်းရန်လမ်းပေါ်တွင်ကျောက်တုံးများသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပစ်ခြင်းဓလေ့ရှိသည်။မင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့»ထို့အပြင်သူသည်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုလိုက်နာကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘုရားဖူးများကဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်မြင့်မြတ်သောနေရာများသို့မဟုတ်လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်ဤကျောက်တုံးကျောက်တုံးများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
အခြားအစဉ်အလာကဖော်ပြသည် Tres Cañosစမ်းရေတွင်းထဲကိုပေါင်မုန့်တစ်လုံးကိုပစ်ချရမယ်၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှစပြီးယဇ်ပလ္လင်အောက်မှစီးကျသောစမ်းရေဟုဆိုနိုင်သည်။ အကယ်၍ အစအနများရေပေါ်မျောနေပါကသူတော်စင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်မည်။ အိမ်သို့သင်ပြန်ယူနိုင်သည်sanandres«, မုန့်ဖုတ်နှင့်ဆေးသုတ်, တဆေးမပါသော breadcrumbs ကနေလုပ်ထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့။
၎င်းတို့သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည် - လေ့လာရန်တောင်းခံသည့်လက်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ပန်း၊ အစားအစာအတွက် ၀ က်ခြံ၊ ခရီးသွားလာရေးအတွက်ကာကွယ်ရန်လှေ၊ ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်သူတော်စင်၏ပုံသဏ္,ာန်၊ အလုပ်။ အဆောင်လက်ဖွဲ့မလုံလောက်လျှင်သင်ယူနိုင်သည် Namonar Herba ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတယ်
ဤအရာအားလုံးသည်အမြစ်တွယ်နေသောအရာဖြစ်သည် အစဉ်အလာ San Andrés de Teixido ၏ Sanctuary ပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်။ ခြေကျင်လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ၊ ဤပေါင်မုန့်ကိန်းဂဏန်းများကိုဝယ်ယူပါ။ ရသေ့ကိုသွားပါ၊ ဆုတောင်းပါ၊ စမ်းရေတွင်းသို့သွားပါ။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ သောက်ခြင်းထက်ရေသည်သောက်သုံးရန်မသင့်သောကြောင့်နှုတ်ခမ်းကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
ရသေ့တောင်မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်၊ သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆောင်ပုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပင်လယ်ရေကြမ်းတမ်းသောအသားအရေရှိပါကအစိမ်းရောင်မြက်ပင်ကိုရှာဖွေရန်ပင်လယ်ကမ်းခြေသို့သွားရမည်။ xuncos က de ben parir။ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့၎င်း၊ သငျသညျအပေါ်ကိုတက်နင်းနှင့်မည်သည့်အင်းဆက်ပိုးမွှားမသတ်ဖြတ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်သယ်ဆောင်သောကြောင့်သတိထားရပါမည် သူတို့အသက်ရှင်စဉ်အခါကဒီမှာမဟုတ်ခဲ့သူတို့၏အမျိုးအ။
အမှန်တရားကတော့ဒီဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်သေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီနေ့လူကြိုက်အများဆုံးမဟုတ်တဲ့အချက်တွေကိုသင်လိုက်နာခြင်းရှိမရှိ၊ ဘုရားဖူးအလွန်ပျော်ရွှင်ပါတီဖြစ်ပါတယ် ၎င်းမှာအလိုဆန္ဒများ၊ မွေးဖွားခြင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းများမှလွတ်မြောက်ခြင်းသဘောမျိုးတွင်ပွဲတော်တစ်ခုရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်သော်လည်းဘာသာရေးအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများနှင့်ဂါလီစီယာတွင်အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » San Andrés de Teixido, ပင်လယ်ကိုထွက်ကြည့်နေ